Ahoana ny fisafidianana ny saosy soja tsara indrindra, sa Tamari izany? -Sosy saosy-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Fotoana: 2018-01-23 Hits: 241
4 MEY 2015 nataon'i SARA NOVAK
Rehefa nihalehibe aho dia nampifangaro saosy niaraka tamin'ny saosy sy sushi. Tsy nampiasa izany matetika ny ray aman-dreniko satria masira loatra. Saingy rehefa olon-dehibe, ny saosy dia nanjary nifangaro tamin'ny umami, na ny tsiro fahadimy miaraka amin'ny mamy, masira, mangidy ary marikivy. Mombamomba ny tsiro tiako io, ary vokatr'izany dia miseho matetika amin'ny sakafo fihinako io. Saosy, na kinova hafa toy ny tamari sy nama shoyu, dia miseho tsy tapaka amin'ny resipeo ao an-tranonay. Fa inona no mahasamihafa azy ireo sy ny iray salama kokoa noho ny iray hafa? Andao hojerentsika akaiky hoe iza amin'ireo vokatra no mahasalama indrindra.
Samy avy amin'ny soja masirasira ny soja sy ny tamari, saingy ny tamari dia tsy manana varimbazaha firy. Raha misakafo tsy misy gluten ianao dia mila mahazo antoka fa tsy misy gluten tanteraka ny vokatra, saingy misy vokatra maromaro eny an-tsena. Tamari somary mandanjalanja kokoa ary kely sira noho ny saosy soja. Ny tsirony dia sarotra kokoa, lalina kokoa ary manankarena kokoa. Tamari dia ny saosy soja japoney tokoa.
Ary avy eo dia misy ilay nantsoina hoe "champagne saosy soja", nama shoyu. Tao amin'ny boky nahandro vegan no novidiko voalohany tao amin'ny fivarotam-boky efa ela tany Hawaii. Izy io dia niseho tamin'ny saika isaky ny fomba fahandro nanomboka ny fanamboarana salady ka hatramin'ny kariera. Nama shoyu dia kinova soja farany avo lenta. Ara-dalàna izy io ary vita amin'ny akora avo lenta toy ny soja sojika sy tsy gmo, varimbazaha, sira an-dranomasina ary rano lohataona. Izy io dia manta sy tsy voaforitra, ary na dia hafanana mihoatra ny 114 degre aza dia maro ny mpihinana sakafo manta no mbola hihinana azy satria misy anzima velona toy ny lactobacillus. Tsy dia be asidra koa izy ary kely sira noho ny saosy soja mahazatra. Saingy miaraka amina vidiny lafo be koa izy io, matetika 2-3 heny noho ny vidin'ny tamari na saosy soja. Fa tena matsiro tokoa.
Iza amin'ireo no tsara indrindra? Amin'ny tranga rehetra, tokony mividy organika ianao satria ny soja lehibe indrindra dia ny soja, izay ovaina matetika amin'ny fototarazo. Ary ho an'ny tsy misy gluten, mpankafy tamari tamari voajanahary aho noho ny fahasarotan'ny tsirony. Afaka mahita izany amin'ny fomba lafo vidy ianao amin'ny ankamaroan'ny fivarotana sakafo ara-pahasalamana. Raha tsy afaka gluten ianao ary mila vokatra izay tena tsy misy ifandraisany amin'ny tsiro dia manandrama nama shoyu. Tonga ao anaty tavoahangy kely izy, lafo vidy, nefa koa mahakamo!
Raha te hanilika ny soja amin'ny sakafonao ianao dia afaka manandrana amino voanio koa. Vita amin'ny ranon'ny voanio manta sy voanio ary sira avy amin'ny masoandro izy io. Tsy misy gluten koa ary misy asidra amine 17. Saingy sarotra kokoa ny mahita azy amin'ny fivarotana enta-madinika. Ka eo ianao no manana azy. Safidy tsara be dia be hanandrana amin'ny fomba fahandro tianao rehetra.
Taloha: Fitafihan'ny soja amin'ny fandrahoan-tsakafo
Next: Sate Sauce misy voaoza sy saosy Fangaro masira